Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo dib u habeyn ku sameeyay xarunta Degmada “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa ku guuleystay in uu dib u habeyn ku sameeyo xarunta Degmada Heliwaa, isago oo kaashanaya shacabka ku nool Degmada.
Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa tilmaamay in tallaabadan ay muujineyso wada shaqeynta shacabka iyo maamulka Degmada ka dhexeyso, waxaana uu xusy in uu laba laabi doono howlo dib loogu soo celinayo bilicda Degmada.
“Waxaan ku guuleystay in aan dib u soo celiyo bilicda xarunta Degmada Heliwaa, aniga oo kaashanaya shacabka ku nool Degmada, waxaana ku rajo weynahay in aan dib u soo nooleeyo xarumaha danta guud ee ku yaala Degmada, si loogu adeego bulshada deegaankan ku nool”ayuu yiri Guddoomiye Cabdixakiin.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa ka codsaday Madaxda Qaranka iyo kuwa maamulka Gobolka Benaadir inay garab istaagaan maamulkiisa si loo soo nooleeyo rajada shacabka ku nool degmada Heliwaa oo haatan ay ka muuqato kuwa u heelan inay ka qeyb qaatan dib u dhiska Degmada.
Degmada Heliwaa oo ka mid ah Degmooyinka ku yaala daafaha magaalada ayaa maamulka Degmadaas waxa uu ku guuleystay hirgelinta waddooyin cusub, jarista geed yahuudka oo dhibaato ku ah amniga, bilic soo celinta iyo dib u habeynta xarunta maamulka oo lagu xardhay hal ku dhigyo ka turjumaya horumarka, dib u dhiska iyo ka shaqeynta amniga.
Maxaa Iska Badalay Kala Horeynta Horyaalka Dalkaada